खानु न पिउनु, फ्रि वाईफाई चलाउनु ?
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:23:17
चुलोमा ग्याँस छैन, दाल छैन, चामल छैन । नुन छैन । तेल छैन । पसल – पसलमा ग्याँसको लाईन छ । मट्टीतेलको, पेट्रोलको लाईन छ । अस्पतालमा सलायनपानीको अभाव छ । सडकमा पैदलयात्रीको भीड छ । गाडीमा यात्रुको भीड छ । जता हे¥यो त्यतै लाईन छ । तनाबै तनाब छ । घरमा पाहुना नआईदिए हुन्थ्यो भन्ने पीर छ । राजनीतिक दलबीचको सँधैको हानाथाप । त्यसमाथि भारतले नाकाबन्दी गरेको छ । तनाबै तनाब छ । कसैलाई मुस्कुराउने जाँगर छैन ।
सुनिन्छ, सरकारलाई पनि तनाबै छ–जनताको किचकिच सुन्नु की ? भारतलाई गुहार्नु ? चीनलाई मुसार्नु की, के गर्नु ? के नगर्नु ? तर, यस्तो तनाबको बीच पनि सरकारले गज्जबकै काम गरेको छ । त्यो के भने –रत्नपार्कमा वाईफाई दिने । सरकारले मन फेरेन भने, अबको तीन हप्तामा रत्नपार्कमा भीड अझ थपिने पक्का छ । वाईफाई –लाग्छ, आजभोली सबैको प्राण यसैमा झुण्डेको छ । वाईफाई छ भने सबै निहुरमुन्टी न को पोजिसनमा आईहाल्छन् –हातमा मोबाईल समाएर । त्यसमाथि, सरकारले नै फ्रि वाईफाई दिने हो भने, कति मानिसले झुत्ति खेल्ने होलान् ?
सित्तै पाए अलकत्रा पनि खाने बानी हाम्रो छँदै छ । तै पनि , वाईफाई कीन ? जनताको तनाब फेसबुक र ट्विटरमा पोखुन् भन्ने सरकारलाई भाको हो की ? जनतालाई सित्तैको वाईफाईमा भुल्याएर भारत , चीनसँग गज्जबकै सम्झौता गरुँला भन्ने छ की ? भोक र रीसले राँकिएका नेपालीले, युट्युव हेरेर मनपेट भर्लान् भन्ने पो लाग्या हो की ? की त सरकारलाई यो लागेको हुनुपर्छ –ईन्स्टाग्राममा पोष्टिने परिकारैले अघाउँछन् जनता ।
बर्षौँदेखि गन्हाएर बसेको रत्नपार्कको डेन्टिपेन्टिङ गर्नुको कारण के यही थियो ? – रत्नपार्कलाई नक्कली रंग लगाएर चम्काउने, फ्रिको वाईफाई दिने र जनतालाई बेबकुफ बनाउने ? यदि रत्नपार्कको ऋंगार सक्कली नै हो भने खै त चर्पी ? पिसाबले मरुञ्जेल च्याप्दा पनि घरतिरै दौडिनुपर्ने । की त त्यसकै भित्ता फर्किनुपर्ने । पार्क चैँ दुङदुङ्ती गन्हाउने अनि हामी जनता त्यै भित्र बसेर फ्रि को वाईफाई चलाउने ? सरकारको यो कस्तो नसुहाउँदो सुबीधा ?
जनता सबै लाईनमा छन् । घरमा चुलो ओभानै छ । सबैको पेट भोको छ । सरकारलाई मतलब छैन । ६, ६ लाख खर्चेर जनतालाई अर्को ललीपप–वाईफाई बाँड्दैछ । ६ लाख सरकारलाई सानो लाग्ला तर त्यै सानो रकमको दाउरै बाँडीदिए, थोरैको सही घरमा चुल्हो बल्ने थियो । लौ, दाउरै नबाँडे पनि, रत्नपार्क, सुनधारा लगायत ब्यस्त ठाउँमा दुई, चारवटा चर्पी नै बनाईदिए हुने । हाम्रो पहिलो आवश्यकता भनेको सँधै , खाने र शौच गर्ने नै हो । अहिले हामी पेटभरी खाने अवस्थामा छैनौँ । सरकारले फ्रि वाईफाई दिने ठाउँ रत्नपार्कतिर जाने हो भने त न ढुक्कले खान पाईन्छ न शौच गर्न नै ? अनि अर्को कुरा, रत्नपार्क बेरोजगारको अखडा बनेको, सरकार कीन देख्दैन ? काम नपाएर रत्नपार्कमा भौँतारिन पुगेका बेरोजगारहरु , फ्रिको वाईफाई चलाउनुमा भन्दा बरु रोजगारसम्बन्धी तालिम लिन पाउँदा नै खुसी होलान् । नत्र, हामीले जनतालाई हरेक हिसाबले चंगोलमा पारेर पागल बनायौँ । यीनीहरुका गुनासा सामाजिक संजालमा पोखुन् र मन शान्त पारोस् भनेर लु वाईफाई फ्रि गर्दिम् भन्ने भाको भए चैँ बेग्लै कुरा ।